Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay Guul daradii Manchester United kasoo gaartay Liverpool | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay Guul daradii Manchester United kasoo gaartay...
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku tilmaamay guuldaradii 5-0 ee Axadii Liverpool ka soo gaartay Premier League ‘maalintiisii ​​ugu madoobeed’ isagoo tabare u ah kooxda 20-ka jeer ku guuleysatay horyaalka Ingariiska.
Mohamed Salah ayaa saddex jeer shabaqa soo taabtay, halka Naby Keita iyo Diogo Jota ay sidoo kale shabaqa soo taabteen, iyadoo kooxda Jurgen Klopp ay waji gabax kala kulantay kooxda ay xafiiltamaan ee Old Trafford.
Solskjaer ayaa qaaday mas’uuliyadda buuxda ee guul -darrada laakiin wuxuu ku adkeystay inuu weli wax ka beddeli karo xaaladda kooxda isagoo ku andacoonaya in kooxdu ay aad ugu dhowdahay inay hadda quusato.
Solskjaer oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Ma fududa in wax la sheego marka laga reebo waa maalintii ugu madaw ee aan hogaaminayay ciyaartoydan, kumaanu fiicnayn shaqsi ahaan iyo koox ahaan, ma siin karno koox Liverpool oo kale ah fursadahaas laakiin nasiib daro waanu samaynay”. ayuu u sheegay Sky Sports News .
“Qaab ciyaareedka oo dhan ma ahayn mid ku filan, waxaan abuurnay furitaanno, waxay heleen fursado Goolka saddexaad ayaa go’aamiyay ciyaarta.
“Aniga ayaa iska leh (mas’uuliyadda), taasi waa taas. Shaqaalaha tababarku aad iyo aad bay u fiican yihiin, aad bay u qurux badan yihiin, waxaan doortaa habka aan u wajahayno ciyaarta, ma ahayn kuwo ku filan caafimaad ahaan waxaanna siinnay boosas aad u badan marka aad siiso ciyaartoy wanaagsan boos dhibco.
Previous articleSaraakiil sare oo lagu dilay dagaalka Guriceel ee maanta iyo wararkii ugu dambeeyey
Next articleInter Milan 1-1 Juventus, P. Dybala oo ka Fujiyay Old Lady Waqtiga Dhimashada
Mohamed hashi - November 26, 2020 0
This product contains natural ingredients that provide anti-inflammatory properties, thereby reducing inflammation. In addition, the formula used helps with soothing scaling and the skin...
Gobolkii saddexaad oo ka mid ah Somaliland oo laga musaafurinayo dadka...
Hordhac: Rayo Vallecano Vs Barcelona ee Horyaalka LaLiga Spain, Liiska Dhaawacyada...